Nilazàn’i Afrika Atsimo Ny Sasany Amin’ireo Onjampeo Fa Mila Mandefa Ireo Mozika Rehetra Avy Ao An-toerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2016 14:43 GMT
Fampisehoan'ny tarika Afrikana Tatsimo Freshlyground miangaly gadona Afro-fusion, tamin'ny 2011. Sary an'ilay mpampiasa Flickr firesika. CC BY-NC-ND 2.0
Ny 12 May, nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org ity lahatsoratra nosoratan'i Kierran Petersen ity, ary naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifampizaràna votoaty.
Nampiditra rafitra iray vaovao ahitàna fatra ny SABC, onjampeo nasionaly ao Afrika Atsimo, izay mitaky hoe 90% amin'ny mozika alefa amin'ny onjampeony dia asa novokarin'ireo mpiangaly mozika “eo an-toerana”.
Natao hampiroboroboana ireo mpanakanto avy ao an-toerana ilay fatra ary hankalazana ny kolontsaina Afrikana Tatsimo, anisan'izany ireo fiteny 11 samihafa ao amin'ny firenena. Saingy inona marina no lazaina amin'ilay hoe “ao an-toerana”? Sarotra be ny mitaza izany.
Maherin'ny 30 tapitrisa no mihaino iray amin'ireo onjampeo 18 samihafa tantanan'ny SABC. Tsy mihatra amin'ireo onjampeo ara-barotra ao amin'ny firenena ilay resaka fatra.
“Fotoana ela vao tonga izy ity,” hoy i Pumza Fihlani, solontenan'ny BBC ety anaty aterineto , ary monina ao Johannesburg. “Betsaka ireo mpanakanto ao an-toerana no efa nitaky ny handaniana ity fanapahankevitra ity, ary azo antoka fa tena faly izy ireo hoe tonga ihany izany. Tsapan'izy ireo toy ny hoe vintana iray ilay izy hampidirany ny tenany any aminà mpihaino hafa.”
Siyabonga Metane, mpiangaly Hip-hop, fantatra tsara amin'ny hoe Slikour, nilaza tamin'ny Radio 702 fa toy ny dikan'ny indostrian'ny mozika tamin'ny famotsorana an'i Nelson Mendela avy any am-ponja ilay izy.
Fihlani miteny hoe ezahan'ny SABC ny hampiseho fa afaka milahatra amin'ireo mpanakanto iraisampirenena ireo Afrikana Tatsimo mpanakanto. Na ireo tsy mpiangaly mozika aza dia nankalaza ilay fanambaràna satria vintana iray ahafahana mihaino karazana mozika hafa io, hatramin'ny mozika nitaizana sy nibeazan-dry zareo.
Hapetraka ho andrana mandritry ny telo volana ilay fatra. Ary amin'ny faran'ny fanandramana, hojeren'ny SABC ny angondrakitra azony mba hijerena hoe hatraiza ny fitiavan'ny mpihaino ireo mozika avy eo an-toerana nalefan'ireo onjampeo.
“Ilàna fampifanarahana sasantsasany izany ho an'ireo efa zatra nihaino matetika ny Beyoncés-nareo, ny Justin Biebers-nareo, mba hahalàla ankehitriny ireo mpanakanto eto an-toerana sy ho mpanosika mavitrika,” hoy i Fihlani.
Nolazain'ny SABC fa hisy fifantohana manokana amin'ny gadona jazz, gospel sy kwaito — karazana hira afaka mivady amin'ny “house music, reggae sy hip hop” — saingy misy endrika sasantsasany manjavozavo amin'ilay fatra. Ohatra, tsy mazava raha toa ireo mozika avy any amin'ny faritra hafa eto amin'ny tanibe ka ho azo heverina ho toy ny mozika eto an-toerana, sa iraisampirenena. Lazain'i Fihlani fa mila mazava misimisy kokoa ny mikasika an'izay, saingy ny ankamaroan'ny olona dia mientanentana fotsiny amin'ny fanànana vintana handre bebe kokoa ireo mpanakanto avy ao an-toerana.
Eny am-pandehanana, mety hampiharina amin'ireo tobinà fahitalavitra tantanan'ny SABC ihany koa ilay rafitra mametraka fatra. Amin'ny Jolay, hoy i Fihlani, ho atosika mba handefa bebe kokoa votoaty novokarina teto an-toerana ireo tobinà fahitalavitra.
“Ampahany ihany koa amin'ny fanokafana ny indostria eto an-toerana izany no sady fametrahana antoka fa hisy ny tsena ho an'ireo zavatra vokarina eto an-toerana ihany” hoy izy.
Liana amin'ny mozika Afrikàna Tatsimo ve? Indro ny sasantsasany amin'ireo anarana tokony ho fantatrao:
15 ora izayNizeria